BWC089 - 16 Saacadood Dheer oo Fudud oo Fudud oo Booliis Laan ah oo Wanaagsan (Xaggo dhan 170-Degree) | Xalka OMG
BWC089 - 16 Saacadood Dheer oo Fudud oo Fudud oo Booliis Baan-culus ah
- 34MP duubitaan.
- Naqshadeynta smart, 128g kaliya.
- Waxaa lagu dhisay batteriga 4000mAH - 16 saacadood duubitaan.
- Taageer kamarad yar oo dibedda ah, 720P dhab ah. (ikhtiyaar)
- Taageero daminta maqalka qaabka muuqaalka, fiidiyowga duubista cod la'aan; shid, fiidiyowga oo leh cod.
- Shaqadii wax duubista ee qarsoon, cod iyo nal muujiye ma jiro markii kamaradu shaqeynayaan.
- Waxqabadka aragtida adag ee habeenkii, oo awood u leh inuu arko muuqaalka wajiga aadanaha oo cad illaa 15M oo mugdi ah.
- Badhanka midabka leh ee badhanka "dansan / shidida" badhanka.
- Ku soo gal saldhigga dalabka ayaa fudeyn u ah dalabka.
- Fiidiyowyo muhiim ah oo la xasuusto oo shaqadii laga xiray.
- Qaylodhaanta codka & tooshka.
- Hal badhanka duubista, duubista loop, waxqabadka ogaanshaha dhaqdhaqaaqa, ha moogaanin sawir sharci fulin ah.
- Shaqeynta wax duubista qarsoon, ma jiro cod muujinaya & nalalka markuu kamarada shaqeynayo.
- Hore u soco oo dib ugu noqo 1-128X.
- Ku shaqeynta kor u qaadista dabeecadda, dhamaan fiidiyowyada iyo sawirrada waxaa lagu soo lifaaqi doonaa waqti, aqoonsi aalad, aqoonsi booliis iyo macluumaad kale, lama awoodin in la saxo ama dib loo habeeyo, iyagoo bixinaya caddeyn sharci oo wax ku ool ah.
- Horay u duubista fiidiyowga, shaqo duuban oo la dheereeyay, ha seegin sawir sharci fulin ah.
- Hawlaha ugu muhiimsan, kuwaas oo ah duubista fiidiyowga, sawir-toogashada recording duubista codka.
- Ku ciyaar maqal, muuqaal iyo sawir goobta goobta lagu daawado
- Xogta fiidiyowga ayaa loo qaybin doonaa oo si otomaatig ah ayaa loo kaydin doonaa, xulasho kasta 5/10/15/20 daqiiqad kasta, adoo ka fogaanaya khasaaraha xogta ee ka dhashay hawlgal qalad ah.
- Codka fiidiyowga shid / shidida, goorta damiyo fiidiyowga, fiidiyowga duubista cod la'aan.
- Wareeg laba-filter ah, midab keli keli keli keli maalintii, oo waadixiya habeenkii.
- Lama arki karo ama tirtiri karo xogta duubista feylasha, ilaa la oggolaado mooyee.
- Iyada oo leh iskudhuuq goobeed 2pcs.
- Shaqada ka hortagga gariirka, waxay kugu taageerayaan inaad sawirro ka qaadatid.
- Biyuhu: IP67
- Si toos ah ugu xir kombuyutarka, ilaalin lambarka sirta ah.
- Lagu dhisay WIFI (ikhtiyaari)
- Waxaa lagu dhisay GPS (ikhtiyaar)
Xalinta Video 2304*1296P 30P;1920*1080P 30P,1280*720 60P,1280*720 30P, 848*480 30P;
camera 34Mega Pixel Camera oo leh ikhtiyaar furan (3/5/10 sawir)
Qaraarka sawirka 4M (2688*1512 16:9), 8M（3226*1814 16:9）, 12M（4838*2722 16:9）,
Language Ingiriis / Russina / Polish / Shiine
Soo dhaweyn / bax 1-128X
Horey u soco Taageerada
ogaanshaha Motion Taageerada
Nalalka Auxiliary Iyada oo hal nal cad ah, gambaleelka taageerada.
clip Clip tayo sare leh oo leh 360 digsi rog
nooca Bakhtiyay -3600mAH batari Lithium
faaiidaysta Time 240 daqiiqo
Rikoodh joogto ah 16 Saacadaha
Ilaalinta password In la dejiyo furaha maamulaha si loo oggolaado tirtirka.
Adeegsade ayaa kaliya arki kara fiidiyeyaasha laakiin ma tirtiri karo.
BWC089 - 16 Saacadood Dheer oo Fudud oo Fudud oo Booliis Baan-culus ah ahaa kii ugu dambeeyey: Waxaa laga yaabaa 25th, 2020 by admin
1213 Wadarta Views 14 Views Maanta
BWC090 - Culeyska Miisaanka Booliska ee Wejiga Kaamirada…